Ny fampihorohoroana dia mahatonga an'i Etazonia hamoaka torohevitra momba ny dia any Algeria
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Ny fampihorohoroana dia mahatonga an'i Etazonia hamoaka torohevitra momba ny dia any Algeria
Janoary 8, 2019
Mampitandrina ireo mpandeha ny tranokalan'ny governemanta amerikana mba hitandrina hatrany rehefa mandeha any Algeria noho ny asa fampihorohoroana.
Ny departemantam-panjakana amerikana dia namoaka mpanolotsaina momba ny dia ho an'i Algeria anio noho ny asa fampihorohoroana. Mampitandrina ireo mpandeha ny tranokalan'ny governemanta mba hitandrina hatrany rehefa mandeha any Algeria noho ny asa fampihorohoroana. Ny faritra sasany dia nitombo ny risika.
Manoro hevitra ny tsy handeha amin'ny:
- Faritra akaikin'ny sisin-tany atsinanana sy atsimo noho ny fampihorohoroana.
- Faritra any an'efitra Sahara noho ny fampihorohoroana.
- Ireo vondrona mpampihorohoro dia manohy mikononkonona fanafihana mety hatao any Algeria. Mety hanafika tsy misy fampandrenesana kely na tsy misy ny mpampihorohoro ary nikendry ny mpitandro ny filaminana Alzeriana vao tsy ela akory izay. Ny ankamaroan'ny fanafihana dia mitranga any amin'ny faritra ambanivohitra, saingy azo atao ny manafika any amin'ny tanàn-dehibe na eo aza ny fisian'ny polisy mavesatra sy mavitrika.
Ny governemanta amerikana dia voafetra ny fahafahany manome serivisy vonjy maika ho an'ny olom-pirenena amerikana ivelan'ny faritanin'i Algiers noho ny fameperana ataon'ny governemanta alzeriana amin'ny dia ataon'ny mpiasan'ny governemanta amerikana.
Vakio ny fizarana momba ny fiarovana sy fiarovana amin'ny pejy fampahalalana momba ny firenena.
Ny torohevitra momba ny dia dia nitohy nampitandrina ireo mpandeha raha manapa-kevitra ny hitsidika an'i Algeria izy ireo:
- Ampahafantaro ny polisy eo an-toerana rehefa mitsidika toerana ivelan'ny tanàna lehibe.
- Mandeha amin'ny rivotra raha azo atao; mijanona amin'ny làlambe lehibe raha tsy maintsy mandeha amin'ny làlana ianao.
- Mandehandeha amin'ireo mpiasan'ny dia malaza izay mahalala ny faritra.
- Aza atao mijanona alina any ivelan'ny tanàna lehibe sy ny toerana fizahan-tany.
- Misoratra anarana ao amin'ny Programme fidirana an-tsehatra Smart Traveller (STEP) mba handray Fanairana ary hanamora ny fitadiavana anao amin'ny fotoana mahamonjy.
- Araho ny Departemantam-panjakana amin'ny Facebook ary Twitter.
- Avereno jerena ny Tatitra momba ny heloka bevava sy ny fiarovana ho an'i Alzeria.
- Ny olom-pirenena amerikana mandeha any ivelany dia tokony hanana drafitra tsy ampoizina amin'ny toe-javatra vonjy maika. Avereno jerena ny Lisitry ny lisitry ny mpitsangatsangana.
Faritra atsinanana sy atsimo
Aza atao fitsangatsanganana any amin'ny faritra ambanivohitra ao anatin'ny 50 km (31 miles) miala ny sisintany miaraka amin'i Tonizia ary ao anatin'ny 250 km (155 kilaometatra) miala ny sisintany miaraka amin'i Libya, Niger, Mali, ary Maoritania noho ny asa fampihorohoroana sy asan-jiolahy.
Fitsangatsanganana an-tanety mankany amin'ny Tany Efitr'i Sahara
Ny mpampihorohoro sy ny vondrona mpanao heloka bevava dia miasa any amin'ny faritra atsimo amin'ny Sahara. Rehefa mandeha any Sahara izahay dia tena mamporisika ny mandeha amin'ny rivotra fotsiny fa tsy amin'ny tanety.
Tsidiho ny tranokalan'ny governemanta amerikana ho an'ny Mpandeha be loza.
108.5 tapitrisa dolara nomena ho an'ny fanamboarana ny terminal vaovao fitsangantsanganana an-tsambo any Port Canaveral
Mpizahatany 4 tapitrisa mahery no nitsidika an'i Israel tamin'ny taon-dasa